Nin 25 Xabo oo moobiillada iPhone-ka codsi guur ugu ban-dhigtay saaxiibtiisa! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Nin 25 Xabo oo moobiillada iPhone-ka codsi guur ugu ban-dhigtay saaxiibtiisa!
Muqdisho – Chen Ming, oo ah da’yar ku nool Shenzen, dalka Shiinaha ayaa dhawaan soo jiitay indhaha dadka la dhacsan isticmaalka telafoonnada iPhone-ka kadib markii uu 25 xabo oo cusub usoo iibsaday si uu astaan jaceyl ah ugu sameeyo gabadha uu jeclaaday si ay uga aqbasho jaceylkiisa.
Previous: Andrea Pirlo oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay cayaaraha kubadda cagta.
Next: Barcelona oo sare u dhigtay xiisaha ay u heyso saxiixa Matthijs de Ligt deal